Abaphathi bamawindi: I-Graphical User Interfaces ye-GNU / Linux | Kusuka kuLinux
Kusukela ekuqaleni kwe I-GNU / Linux, ukusetshenziswa nokwehluka kwe- I-Graphical User Interfaces (i-GUI) etholakalayo ibikhula. Futhi ngasikhathi sinye, ukuncintisana okuthile futhi kukhule phakathi kwabasebenzisi, abasha nabanolwazi, mayelana nokuthi yikuphi okuhle kakhulu phakathi kwezinketho eziningi ezikhona.
Noma kunjalo, izinketho zamanje ziyatholakala kusuka ku- I-GUI ye-GNU / Linux, okungukuthi, i- Abaphathi bamawindi (Abaphathi beWindows - WM, ngesiNgisi) edume kakhulu noma eyaziwa kakhulu, imvamisa iza ngokuhlanganiswa ngaphakathi kwalokhu okwaziwayo futhi okuphelele Izindawo zedeskithophu (Izindawo zeDeskithophu - DE, ngesiNgisi) ngenkathi ezinye eziningi, zizinhle, kodwa mhlawumbe zingaziwa kakhulu noma zisetshenziswe, zivame ukuza ngaphandle kwe Imvelo yedeskithophu ethize.
Masikhumbule ukuthi, phakathi kuka Imvelo yedeskithophu futhi a Umphathi wewindi kunokwehluka okusobala lapho kukhulunywa nge a Uhlelo Lokusebenza lwe-GNU / Linux.
Okokuqala, kufanele kuqhakambiswe ubukhona be- X Iwindi System (X Windows, ngesiNgisi), which Kubhekwa njengesisekelo esivumela ukudweba izinto zemifanekiso esikrinini. Njengoba, X Windows inikeza ukusekelwa okuvumela ukuhamba kwamawindi, ukuxhumana nekhibhodi negundane, futhi kudwebe amawindi. Futhi konke lokhu kuyadingeka kunoma iyiphi ideskithophu ebonakalayo.
Ngalokhu engqondweni, singaqonda kangcono ukuthi iyi- Umphathi wewindi futhi a Imvelo yedeskithophu.
1 Umphathi wewindi
2 Imvelo yedeskithophu
3 Abaphathi bamawindi ngokuqhathanisa izindawo zedeskithophu
3.1 Ngokuphathelene nendawo ethile yedeskithophu
3.2 Ukuzimela kwendawo ethile yedeskithophu
Ingcezu yephazili elawula ukubekwa nokubukeka kwamawindi. Futhi lokho kudinga X Windows ukusebenza kepha hhayi kusuka ku Imvelo yedeskithophu, lefomu eliyisibopho. Futhi ngokusho kwe- I-ArchLinux Official Wiki, esigabeni sayo esizinikezele ku- «Abaphathi beWindows«, Lezi zihlukaniswe izinhlobo ezi-3, okulandelayo:
Ukubeka: Lokho okulingisa ukubonakala nokusebenza kweWindows ne-OS X, ngakho-ke, lawula amawindi njengezicucu zamaphepha kudeskithophu, ezingabekwa eyodwa phezu kwenye.
Ukuthayipha: Lezo zohlobo "lwe-mosaic" lapho amawindi angadluli khona, nalapho kuvame ukusetshenziswa kakhulu kakhulu kwezinqamuleli zekhibhodi, futhi kuncike ekuncikeni okuncane ekusetshenzisweni kwegundane.
Amandla: Lezo ezikuvumela ukuthi ushintshe ngokunamandla ukwakheka kwamawindi phakathi kwamatshe noma izinto ezintantayo.
Kuyinto noma uhlelo oluhlanganiswe kakhulu kune- Umphathi wewindi. Futhi-ke kudinga zombili X Windows njenge Umphathi wewindi, ukusebenza. Kungakho-ke imvamisa ifaka awabo kanye / noma basebenzise i-WM eyodwa noma amaningi azimele ukuze asebenze kahle.
Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukuthi wazi ukuthi a Imvelo yedeskithophu ngokuvamile kufaka isethi yezinhlelo zokusebenza ezihlanganiswe ngokuqinile ukuze zonke izinhlelo zokusebenza zazane, njengokuthi, uhlelo lohlobo iphaneli (ibha yomsebenzi) lokho kusiza imisebenzi ethile njengokubeka okuncane izinto (amawijethi) isenzo esisheshayo noma imininingwane esivuna ukuthuthukisa ulwazi lomsebenzisi.
Uma kwenzeka, ufuna ukwazi kabanzi ngefayela le- Izindawo zedeskithophu, sincoma ukuhlola okufakiwe kwethu okulandelayo okutholakalayo kwangaphambilini:
Deepin, onkulunkulu y Budgie
Abaphathi bamawindi ngokuqhathanisa izindawo zedeskithophu
Ngokuphathelene nendawo ethile yedeskithophu
I-Metacity: Kusuka ku-GNOME
luvungazele: Kusuka ku-GNOME Shell
KWin: Kusuka ku-KDE ne-KDE Plasma
I-XFWM: Kusuka kuXFCE
I-Muffin: Kusuka kuCinnamon
I-DeepinWM: Kusuka ku-Deepin
gala: Kusuka ku-Pantheon
I-BudgieWM: Kusuka kuBudgie
UKWM: Kusuka e-UKUI
Ukuzimela kwendawo ethile yedeskithophu
Ngemuva kwesinyathelo: http://afterstep.org/
I-WM enhle: https://awesomewm.org/
Umenzi Wewindi: https://www.windowmaker.org/
Siyethemba lokhu "okuthunyelwe okuwusizo okuncane" mayelana ne «Gestores de Ventanas», esivele isetshenziswe ngaphakathi noma ngaphandle a «Entorno de Escritorio», okungukuthi, ngendlela encike noma ezimele enye yalezi, inesithakazelo esikhulu nokusetshenziswa kwayo, kuyo yonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwemvelo emangalisayo, enkulu futhi ekhulayo yezicelo ze «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Abaphathi bamawindi: I-Graphical User Interfaces ye-GNU / Linux
UJuvenal Salinas Maldonado kusho
Imininingwane ethakazelisayo. Ngangizwile ngabaphathi abathile bamawindi kepha uhlu olunikezayo luhlaba umxhwele ngempela. Ngiyabonga.
Phendula ku-juvenal salinas maldonado
Ukubingelela, Juvenal. Siyabonga ngokuphawula kwakho. Siyajabula ukuthi uluthandile ulwazi nokuthi belusizo.
UJonathan System Engineer kusho
mate yindawo enhle yedeskithophu, ngikuthole kungakholeki kuzo zombili i-laptop yami yakudala kanye ne-pc yedeskithophu yami, kwi-laptop yami yakudala ngisebenzise ubuntu obujwayelekile futhi kudle u-6-7% we-processor, ngenkathi ku-ubuntu mate kudle 1-2 % weprosesa idliwe kancane, kudeskithophu yami i-pc ejwayelekile ubuntu busetshenziswe u-2-3% we-processor, ngenkathi ku-ubuntu mate kudle u-0.5-1% we-processor, ngamagama ambalwa ubuntu obunemvelo yomlingani obudle kakhulu i-cpu kakhulu kukhompuyutha yami yakudala engu-64 bit 2012 njenge-ryze 8 desktop pc yami.
Phendula ku-Jonathan System Engineer
UBryan Vicente Urquiza kusho
Uqinisile, ukusetshenziswa kuncane futhi kuvula izinhlelo ngokushesha, ngiyisebenzisa isonto lonke futhi ngiyethemba ukuthi iyaqhubeka kanjena
Phendula uBryan Vicente Urquiza
Elizabeth montana kusho
Ngijabule ngomlingani wami, noma ingenakho ukwenza ngokwezifiso okuningi njengezinye izindawo, kunginikeza engikudingayo, ukwenza ngokwezifiso okuyisisekelo okulula, kepha ngishintsha isivinini esihle lapho kuvulwa izicelo, ngaphezu kokuba ne ukusetshenziswa kweprosesa okuphansi nenkumbulo yenqama, yize kwimemori yenqama angikhathazeki kakhulu ngokuba ne-8gb yenqama, kepha ukusetshenziswa kwayo okuphansi kweprosesa kungishiyile othandweni, okungu-0.5% njalo ngiphumule, ngizamile ezinye izindawo futhi zifinyelela ku-3-4% njengegobolondo le-gnome ne-kde plasma ifinyelele ku-2-3% ngenkathi umlingani engaphansi kuka-0.5% WOWOWOWOWOWOW, futhi bengilokhu ngiyivivinya izinyanga ezingaphezu kwezingu-8 kwi-PC yami yedeskithophu enkulu futhi ayikaze inginikeze izinkinga zokushibilika, ngibuka amavidiyo ku-YouTube futhi kumnandi angazi Konke kuketshezi ngendlela obekufanele kube ngayo, into enamathele kwi-gnome futhi efanayo ne-kde plasma.
Phendula u-Elizabeth montana
UMario inhlebo kusho
I-Mate iyashesha angikaze ngicabange ukuthi ingashintsha imvelo yami ngokubukeka okuyisisekelo, futhi ngikwenze ngenxa yokuthi kushesha kangakanani, ngivula i-google chrome futhi ivule ngomzuzwana owodwa ngokushesha okukhulu, okufanayo nezinhlelo ezimbalwa Ngisebenzisela ukukhula kwami.
Phendula uMario triviño
UJean Carlos Granda kusho
IMvelo DESKTOP ENVIRONMENT iyahlaba umxhwele, konke kuzinzile futhi anginankinga, kubuye kube ngokuchofoza okusheshayo futhi nesicelo sakho sesivele sivuliwe, kulabo abangazange bazame, kwenze, kuzokufanele.
Phendula uJean Carlos Granda
UFrancisco Diaz kusho
Ngithanda umbala oluhlaza ukuthi imvelo ine-hehe ngokukhuthazwa umuthi, ngiyayithanda le mvelo enginayo kusuka ku-ryzen 7 desktop pc yami iminyaka emi-3 futhi ngikholwe ukuthi iyashesha kakhulu, igcina ukusetshenziswa okuphansi kwe-cpu yayo, Ngibe nezinkinga kwezinye izindawo, kepha ngiyajabula ukuthi benginakho njengokokuqala, ngendlela engisebenzise ngayo ubuntu kusukela ngo-2013 futhi ngisebenzisa ubuntu mate kusukela ngo-2018 njengowokuqala.
Phendula uFrancisco Diaz
USteven Carrion kusho
Bengilokhu ngisebenzisa i-fedora nge-SPING DE MATE, futhi yize ekuqaleni benginenkinga, bese ixazululwa futhi kuze kube manje ngenza kahle kakhulu, le ndawo ishesha kakhulu.
Phendula uSteven Carrion
u-abraham vizcarra kusho
Ngiqhubeka nokuyisebenzisa izinyanga eziyi-7 futhi kuze kube manje inginikeza imiphumela emihle yalokho engikudingayo.
Phendula u-abraham vizcarra
U-Alejandro Rodriguez kusho
shiya i-kde plasma yale ndawo, ngiyisebenzisa ku-debian yami futhi angiceli okunye.
Phendula u-Alejandro Rodriguez
uleonardo garcia kusho
Ngizofaka ubuntu mate ukubona ukuthi kuhle yini.
Phendula u-leonardo garcia
U-Eduardo Medina kusho
Ukuvuselela isistimu uma une-ubuntu womlingani, hamba ubheke i- "Software update" lapho uma uthola izibuyekezo uyinikeze ukufaka futhi uma usuqedile kufanele uqalise kabusha uhlelo, ukufaka izinguquko.
Phendula u-Eduardo Medina
Ukuhlaselwa okusha kweForeshadow kuthinta amaprosesa we-Intel, AMD, IBM ne-ARM
I-UKUI: Imvelo ye-Linux engasindi eyenziwe nge-GTK ne-Qt